DVB TV - ဥပဒေအထက်မှာ အဖွဲ့အစည�
DVB TV - ဥပဒေအထက်မှာ အဖွဲ့အစည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ ခံစားရဟု သူရဦးရွှေမန်းေ
DVB TV - ဥပဒေအထက်မှာ အဖွဲ့အစည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ ခံစားရဟု သူရဦးရွှေမန်းပြော
Tags: DVB, burma, burmese, myanmar, news, daily tv, live update, dassk, feature, interview, yangon, mandalay, kachin, war, full coverage, aung san suu kyi, democracy, television, network, TV, VJ, CJ, analysis, tourism, information, online, independent, media, reform, pbs
This video (DVB TV - ဥပဒေအထက်မှာ အဖွဲ့အစည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ ခံစားရဟု သူရဦးရွှေမန်းေ) has been derived to us from the YouTube Data API v3 using this link. The googleapis.com domain is owned by Google (the parent company of YouTube). Therefore, we do not have control or permission to remove or modify videos served from googleapis.com.
DVB TV - အသတ်ခံရတဲ့အမှုမှာ သံသယရှိသူ တပ်မတော်သားကို အရပ်ဖက်ကို လွှဲပြောင်းဖို့လိုလား
DVB TV - ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဥသျှစ်ပင်မြို့က အမျိုးသမီးတယောက် အသတ်ခံရတဲ့အမှုမှာ သံသယရှိသူ တပ်မတော်သားကို အရပ်ဖက်ကို လွှဲပြောင်းပြီး အမြန်စစ်ပေးဖို့ မိသားစုဝင်တွေက လိုလားနေပါတယ်၊ဒီသတင်းကို ကိုမင်းညိုကပေးပို့ ထားတာပါ။
DVB - ရေတွင်းတူးရာမှ မီးတောက်မီးလျှံထွက်
DVB TV - ရေတွင်းတူးရာမှ မီးတောက်မီးလျှံထွက်
ဦးကိုနီကို အနီးကပ် သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရ တဲ့အချိန်မှာ ဦးကိုနီ လက်ထဲမှာ မြေးငယ် ကလေးကို ချီပိုးထားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂ နှစ်နဲ့ ၂ လသာ ရှိသေးတဲ့ ဦးကိုနီရဲ့ မြေးလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကိုနီကို သေနတ်နဲ့ ပစ်တဲ့အချိန်မှာ သေနတ်သံကို အနီးကပ်ဆုံး ကြားလိုက်ရတဲ့ ဒီကလေးငယ်လေးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကတော့ လက်တလောမှာ စောင့်ကြည့်နေရဆဲပဲလို့ ဦးကိုနီရဲ့ သမီး ဒေါက်တာ ယဉ်နွယ်ခိုင်က 7Day TV ကိုပြောကြားထားပါတယ်။
ရုပ်သံသတင်းထောက် - အလှလေးသူဇာ
DVB - ဦးကိုနီ လုပ်ကြံဖို့ သိန်းတထောင်ပေး စေခိုင်းသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်တဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက နောက်ဆက်တွဲသတင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ငွေကြေးပေးသတ်ဖြတ်ခိုင်းသူဟာ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ဝါဆိုရပ်ကွက် မဏ္ဍိုင်လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ အောင်ဝင်းခိုင်လို့ပါရှိပါတယ်။
ပြစ်မှုကျုးလွန်ဖို့ ငွေပေးစေခိုင်းသူ လတ်တလောမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ တပ်မတော်မှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄မှာ မိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ နှုတ်ထွက်ခိုင်းကြောင်း၊ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရတဲ့နေ့မှာ အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်မှု သတင်းအချက်အလက်တွေ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ စီစီတီဗီမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အောင်ဝင်းခိုင်နဲ့ ဆက်စပ်တရားခံတွေ ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးကို တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အောင်ဝင်းခိုင်နေထိုင်တဲ့ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ မဏ္ဍိုင်လမ်းကို သွားရောက်ပြီး ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကျော်ဇေယျက သွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး - ကျော်ဇေယျာဝင်း
DVB TV - 15.02.2017
ကိုအေးနိုင်ပြန်ပြောပြတဲ့ မတရားအသင်း ပုဒ်မ ၁၇ (၁)အမှုဖြစ်စဉ် (ရုပ်သံ)
DVB TV -ကိုအေးနိုင်ပြန်ပြောပြတဲ့ မတရားအသင်း ပုဒ်မ ၁၇ (၁)အမှုဖြစ်စဉ် (ရုပ်သံ)
DVB - မေယုဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
DVB TV - မေယုဒေသမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကို ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV - ၆၆ဃနဲ့တရားဆွဲခံထားရတဲ့ ကိုဆွေဝင်းကိစ္စ တောင်းပန်စရာ ညှိနှိုင်းမှုလဲမလိုဘူး
DVB TV - ဦးဝီရသူအပေါ်ရေးသားချက်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး၆၆ဃနဲ့တရားဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနောင်းအယ်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတောင်ပန်စရာလဲမလိုသလိုညှိုနှိုင်းမှုလဲလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV - ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့က ကာစီနိုရုံများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး မိန်းကလေး ၈၀ ကိုခေါ်ဆောင်
DVB TV - ကိုးကန့်တပ်​​တွေဟာ ​လောက်​ကိုင်​မြို့က အကြီးဆုံး​လောင်းကစားရုံတွေကိုလည်း ၀င်​​ရောက်​ တိုက်​ခိုက်ခဲ့ပြီး မိန်းခလေး ၈၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့​တယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်​။
မတ်လ ၆ ရက်နေ့က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ကိုးကန့်ဒေသဦးစီး ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးပယ်​​စောက်​ချိန်​ပိုင်​ဆိုင်​တဲ့ ပယ်​စိမ်း​လောင်းကစားရုံမှာ ကား ၁၅ စီး မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး လူ ၁ ဦး​သေခဲ့ပါတယ်။ လောက်ကိုင်မြို့ ဖရုံသီး​ဟော်​တယ်​​ရှေ့က ရှင်းကျင်​ကျန်း ​လောင်းကစားရုံမှာလည်း လူ ၈ ဦး ဗုံးမှန်​သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ ကိုးကန့်​ဘဏ္ဍာ​ရေးကိုင်​တဲ့ လျှိုအား​ပေါင်​ ပိုင်ဆိုင်​တဲ့ ဖူလီလိုက်​​လောင်းကစားရုံကို ဖျက်​ဆီးပြီး ​ငွေ​တွေယူကာ မိန်းခ​လေး​ ၈၀ ဦးကို ဖမ်းဆီး​ခေါ်​ဆောင်​သွားတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေ တဦးကပြောပါတယ်။
DVB TV - သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်
DVB TV - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်နေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေ ကောင်းနိုးရာရာများကိုကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်
တင်ဆက် - အာကာ၊ ဟေမာဝင်း
ရိုက်ကူး၊ တည်းဖြတ် - ဒီဗွီဘီ
DVB - ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းတဦးကို စစ်ဆေးနေ
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း တဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဦးကျော်ဇေယျ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV - 23.02.2017
DVB - ယခုနှစ်မှာပဲ အမေရိကန် နိုင်ငံ ကော်ဖီဈေးကွက်ကို ကွန်တိုင်နာ ၁၀ လုံးအထိတင်ပို့နိုင်
DVB TV - မြန်မာ့ကော်ဖီ ပြည်ပတင်ပို့မှုဈေးကွက်ဟာ မိတ်ဆက်အနေအထားသာရှိနေပေမယ့် ယခုနှစ်မှာပဲ အမေရိကန် နိုင်ငံ ကော်ဖီဈေးကွက်ကို ကွန်တိုင်နာ ၁၀ လုံးအထိတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ အောင်ကိုကိုလတ် ပေးပို့ထားတာပါ။
DVB TV - ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု လူငယ်သဘာဝ ပြောဆိုကြရာကနေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမုန်းတရားနဲ့ ကျုးလွန်
DVB TV - ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်မှုအခြေအနေတွေကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ပြောကြားခဲ့ရာမှာ ခုဖမ်းဆီးထားတဲ့ သူတွေ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ထားတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ကြံမှု ဖြစ်စဉ်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရမှာ တပ်ရင်းတခုထဲ က လူငယ်တွေ စစ်သားသဘာဝတပ်ကထွက်ပြီး စီးပွားရေးတူတူလုပ်ကြတဲ့အခါ လူငယ်သဘာဝပြောဆိုကြရာကနေတဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအမုန်းတရားနဲ့ အောင်ဝင်းခိုင်ကပြုလုပ်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သလို အဲဒီထဲမှာ အပတ်စဉ်တခုထဲ တပ်ရင်းတခုထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကတော့ အခုလိုလုပ်ရပ်မ်ျိုးကို မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြားသွာပါတယ်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်မူအခြေအနေတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ၂၅ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မူးယစ်ဆေးဝါးပြတိုက်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ချိန်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေက ခုလိုပြောခဲ့တာပါ။
DVB - မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ သတင်းထောက်များကို ၄ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်မည်
မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ သတင်းထောက်(၃)ယောက်ကို (၄)ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးတဲ့အခါ ဖမ်းဆီးရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်အရာရှိ (၂)ဦးကို တရားလိုပြသက်သေအဖြစ် စစ်ဆေးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ကျော်ဇေယျာဝင်း သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV - 17.08.2017
DVB - ရှေ့နေဦးကိုနီ လုပ်ကြံဖို့ စေခိုင်းသူ အောင်ဝင်းခိုင် နေပြည်တော် ပရဆေးဥယျာဉ်နားမှာ ပျောက်
ရှေ့နေဦးကိုနီ ကို လုပ်ကြံဖို့ ငွေကျပ်သိန်းတထောင်ပေးပြီး စေခိုင်းခဲ့သူ အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ နေပြည်တော် ပရဆေးဥယျာဉ်နားမှာ နောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း ပြည်ထဲရေးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ နေပြည်တော် မြို့ထဲ လမ်းမတွေပေါ်က လုံခြုံရေးကင်မရာ စီစီတီဗီ မှတ်တမ်းတွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့် အောင်ဝင်းခိုင် ဘယ်သူနဲ့ ထွက်သွားတယ် ဆိုတာကို ခြေရာခံဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ နယ်မြေနေရာ အခြေအနေတွေကို ဦးအောင်ဆန်းဦးက နေပြည်တော်ကနေ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
DVB TV - 27.02.2017
DVB - မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အခမဲ့အွန်လိုင်း လက်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှု ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခု စတင်
DVB TV - မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အခမဲ့အွန်လိုင်း လက်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှု ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခု စတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ သတင်းကိုတော့ ခိုင်ပန်းနုကတင်ဆက်ထားပါတယ်။
DVB - မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရတဲ့ သတင်းထောက်များ ရုံးထုတ်
မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၁၇(၁)နဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရတဲ့ သတင်းထောက်များကို သီပေါတရာရုံးမှာ (၄)ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်မှု မြင်ကွင်း။
DVB TV - 18.08.2017